မြိတ်ကျွန်းစု - ဝီကီပီးဒီးယား
မြိတ်ကျွန်းစု (အင်္ဂလိပ်: Mergui Archipelago or Myeik Archipelago) သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိသော ကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ခန့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မလေး ကျွန်းဆွယ်၏ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဖက်ရှိ ကပ္ပလီပင်လယ်တွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပသျှူးကျွန်းစုဟုလည်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။
ကတန်ကျွန်းသည် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီး စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၇၀ ကျယ်ဝန်းကာ ‌မြိတ်မြို့ အနောက်ဘက် ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရှိသည်။ ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းက ကက်သရင်း ကျွန်း ဖြစ်ကာ၊ တောဖုံးနေပြီး ကမ်းစပ်၌ လမုတောများ ပေါက်ရောက်နေသည်။ အခြား ထင်ရှားသော ကျွန်းများမှာ -
ခရစ္စတီးကျွန်း၊ မြိတ်ကျွန်းစုရှိ တောင်ဖက်အစွန်ဆုံးကျွန်း
ဒေါင်းကျွန်း (Ross Island)
ကွမ်းသီးကျွန်း (Kabosa Island)
ကတန်ကျွန်း (King Island)
လမင်းကျွန်း (Lamin Island)
လန်ပိကျွန်း (Sullivan's Island)
လက်စွပ်အော်ကျွန်း (Domel Island)
မလိကျွန်း (Mali Kyun) မြိတ်ကျွန်းစုရှိ မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးကျွန်း
ငွေကျွန်း (Money Island)
စခန်းသစ်ကျွန်း (Sellore Island)
တနင်္သာရီကျွန်း (Tenasserim Island)
သူဌေးကျွန်း (Son Island)
သံကျွန်း (Davis Island)
သရောသဟန်ကျွန်း (Elphinstone Island)
Zadetkyi (Saint Matthew's Island)
ALDFG ဟု အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ်သော စွန့်ပစ် သို့ ပျောက်ဆုံးငါးဖမ်းပိုက်များ၊ ကြိုးများကြောင့် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ၈၇ နေရာတွင် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးစပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအရာများသည် သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ရေအောက်ကျောက်ဆောင်များပေါ်သို့ ကျရောက် ရစ်ပတ်မိပြီး ရေနသတ္တဝါများ၊ သန္တာကျောက်တန်းများ ပျက်သုဉ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၃၇၇။
↑7days news journal. 19,22. ဩဂုတ် ၁၉. p. 27. Unknown parameter |access date= ignored (help); Check date values in: |date= (help)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြိတ်ကျွန်းစု&oldid=531660" မှ ရယူရန်
၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။